एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको सूचीकृत शेयरमा लगानी बढ्यो | आर्थिक अभियान
एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको सूचीकृत शेयरमा लगानी बढ्यो
मंसिर १३, काठमाडौ। एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले कात्तिक मसान्तसम्मको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार फण्डको सूचीकृत शेयरमा लगानी असोज मसान्तको तुलनामा कात्तिक मसान्तमा वृद्धि भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा सूचीकृत शेयरमा रू. ८ करोड ७१ लाख ३८ हजार लगानी गरेको उक्त फण्डले कात्तिक मसान्तसम्ममा वृद्धि गरेर रू.९ करोड ५१ लाख ८८ लगानी गरेको छ ।
कात्तिक महीनामा फण्डले लगानी गरेका कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएसँगै समग्र सूचीकृत शेयरमा गरेको लगानीमा वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी फण्डको एनएभीमा पनि असोज महिनाको तुलनामा कात्तिक महीनामा वृद्धि भएको छ ।
फण्डको एनएभी असोज मसान्तमा रू. १० दशमलव ६६ रहेकोमा कात्तिक मसान्तमा बढेर रू. १० दशमलव ८३ पुगेको छ । त्यसैगरी फण्डको नाफा पनि बढेको छ । असोज मसान्तसम्ममा रू. २ करोड ९९ लाख ७८ हजार नाफा कमाएको उक्त फण्डले कात्तिक मसान्तसम्ममा वृद्धि गरेर रू. ३ करोड ७९ लाख ४९ हजार नाफा कमाएको छ ।
कात्तिक महीनामा फण्डको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । असोज मसान्तसम्ममा फण्डले रू. ३ करोड २६ लाख ८० हजार आम्दानी गरेकोमा कात्तिक मसान्तमा वृद्धि गरेर रू. ४ करोड १६ लाख ९२ हजार आमदानी गरेको छ ।